Select ratingGive जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे 1/5Give जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे 2/5Give जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे 3/5Give जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे 4/5Give जगदीश दाइ, कहाँ हराएको ? / नयनराज पाण्डे 5/5
Select ratingGive भित्तेका उद्‍घाटन माला / जगदीश घिमिरे 1/5Give भित्तेका उद्‍घाटन माला / जगदीश घिमिरे 2/5Give भित्तेका उद्‍घाटन माला / जगदीश घिमिरे 3/5Give भित्तेका उद्‍घाटन माला / जगदीश घिमिरे 4/5Give भित्तेका उद्‍घाटन माला / जगदीश घिमिरे 5/5
शङ्का के अब पनि उसको बयानमा होला / ज्ञानुवाकर पौडेल